नायिका कलाको दिपकसँग महोत्सवमै रोमान्स (भिडियो) « Dainiki
नायिका कलाको दिपकसँग महोत्सवमै रोमान्स (भिडियो)
३० फागुन, काठमाडौं । लोक गायन क्षेत्रमा अलग्गै पहिचान बनाउन सफल नाम हो, कला लम्साल । सुन्दरी गायिकाको रुपमा समेत चिनिँदै आएकी उनी गायनको अलवा मोडलिङमा समेत सक्रिय छिन् । उनका करिब दर्जन एल्बम बजारमा आएका छन् । दुई दर्जन बढी गीत गाएकी उनको पुरुषोत्तम न्यौपानेसँग गाएको ‘तराई आँगन हिमालको छाना छ, कसले भन्यो हाम्रो देश सानो छ’, ‘बनैमा पुल्यो चमेली’ लगायत थुप्रै गीत हिट भएका छन् ।
उनको अहिले ‘ए साइली’ बोलको नयाँ गीत ल्याएकी छन् । यो गीत आकर्षक म्युजिक भिडियो सहित सार्वजनिक भएको हो । शब्द, संगीत दीपक खड्काको रहेको यो गीतमा कलालाई स्वरमा दीपकले नै साथ दिएका छन् । गीतको भिडियोमा पनि उनी आफैँ देखिएकी छन् । महोत्सवको वातावरणमा छायाँकन गरिएको गीतको भिडियो छायाँकन तथा निर्देशन दुर्गा पौडेलले गरेकी हुन् । नविन घर्तीमगरको सम्पादन रहेको भिडियो एकता फिल्मस्ले निर्माण गरेको हो ।
यस्तै कलाकै स्वरमा रहेको अर्को गीत पनि आउने क्रममा रहेको छ । हाल रेकर्डिङ सम्पन्न भइसकेको ‘फूल राम्रो बास्नाले’ बोलको गीत केही दिनमै यूट्यूवमार्फत रिलिज गर्ने तयारी गरिएको छ । उनले आफ्नो सिर्जना आफ्नै युट्युव च्यानल कला लम्सालमार्फ सार्वजनिक गर्ने गरेकी छिन् ।
प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार १३:०५
५ जेठ, काठमाडाैँ । नेपालमा थुप्रै सेलिब्रेटीहरूले दाेस्राे विवाह गरेका छन् । प्रियंका कार्की –फूलमाला
नायिका स्वस्तिमा खड्काको “एक चुम्बन” इन्डियन रियालिटी सो डान्सका बिजेता सुजन मार्पालाई (भिडियोसहित)
५ जेठ, काठमाडाैँ । चर्चित नायिका स्वस्तिमा खड्का र सुजन मार्पा तामाङको अभिनय रहेको ‘एक
नायिका पूजना प्रधानकाे विरुद्धमा १० प्रतियाेगी, के भएको थियो घटना ?
३ जेठ, काठमाडाैँ । बैशाख २९ गते काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सम्पन्न भएको ‘द सुपर मम’
डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘मेरो हर खुशी…’ सार्वजनिक भएको छ । प्रताप दासको स्वर,